Soo dejisan Photo Vacuum Packer 2010.3 – Vessoft
WindowsSawireynta iyo qaabeyntaTifatiraha sawiradaPhoto Vacuum Packer
Bogga rasmiga ah: Photo Vacuum Packer
Photo Vacuum Packer – software si loo abuuro nuqulada sawirada ee la isku qurxiyo. Hawsha ugu weyn ee software-ka waa in la daabaco sawirada asalka ah qiimaha ugu fiicnaanta iyadoon lumin tayada. Photo Vacuum Packer wuxuu abuuraa nuqullada muuqaalka sawirada ee la isku qurxiyo ee shakhsi shakhsiyadeed oo leh cabbir yar iyo tayada asalka ah, laakiin faylasha asalka ah ee asalka ah waxba isma beddelin. Nidaamku wuxuu dib u dhigi karaa sawirada adigoo hoos u dhigaya midabka, buuqa digital ama macluumaadka xad-dhaafka ah. Photo Vacuum Packer waxaa ku jira sawir-muuqaal aasaasi ah oo taageera PNG, BMP, TIFF qaababka wax-soo-saarka iyo JPEG-ta mid. Photo Vacuum Packer ayaa sidoo kale raadin kara sawirada isku duuban oo leh heer sare oo sax ah iyada oo ay ugu wacan tahay isbarbardhigga faylka ee heerarka baytarta.
Faafinta sawirada qiimaha ugu wanaagsan
Qaybinta sawirada sawirada
Soo dejisan Photo Vacuum Packer
Faallo ku saabsan Photo Vacuum Packer
Photo Vacuum Packer Xirfadaha la xiriira